Home » Vaovao momba ny dia an-tserasera » Air BP manitatra mankany amin'ny seranam-piaramanidina Muenster Osnabrück
Air BP, mpamatsy serivisy fiaramanidina fiaramanidina iraisam-pirenena, dia manitatra ny diany any Alemana miaraka amin'ny fanambarana fa nahazo fifanarahana vaovao tao amin'ny seranam-piaramanidina Muenster Osnabrück (FMO / EDDG) izy. Ny fifanarahana, nandresy taorian'ny fizotran'ny fe-potoana lava dia nanomboka ny 01 aprily 2018. Muenster Osnabrück dia hahazo famatsiana solika jet sy avgas 100LL. Air BP koa dia hanome an'i Muenster Osnabrück avgas tsy misy loha ary voalohany amin'ny toerana misy ny Air BP 41 any Alemana, izay omena grady UL91.
"Nisafidy ny Air BP izahay noho ny fahaizany malaza amin'ny fanohanana ara-teknika sy ny asa, ny solontenan'ny mpivarotra eo an-toerana ary ny fahavonany hampiasa vola amin'ny seranam-piaramanidina," hoy ny talen'ny fitantanana ny seranam-piaramanidina Muenster Osnabrück, Prof. Dr Rainer Schwarz.
Nisy programa iray nifanarahana momba ny tetezamita mialoha ny fanomezana amin'ny mpamatsy solika am-perinasa.
Juergen Kuper, mpitantana jeneralin'ny Air BP, Eoropa afovoany ary Benelux dia nanampy hoe: "Faly izahay manome an'i Muenster Osnabrück ary manantena ny hanohana ny fitomboan'ny seranam-piaramanidina ary hanamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny ekipanay sy ny seranam-piaramanidina. Matoky izahay fa afaka manohana ny fampitaovana ara-barotra ao amin'ny Muenster Osnabrück izay manalalaka ny varotra sy ny sidina ankapobeny ary koa ny hetsika mpikirakira fototra. '
Iray amin'ireo seranam-piaramanidina rezionaly lehibe indrindra any Alemana miaraka amina velarana olona enina tapitrisa, ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Muenster Osnabrück dia manompo ny faritry ny avaratry Ruhrgebiet, atsimon'i Lower Saxony, Emsland, Westphalia ary ny faritra Netherlands.
Muenster Osnabrück dia antenaina hanakaiky ny maridrefan'ny dian-tongotra an-tapitrisany amin'ny taona 2017 ary itoeran'ireo hetsiky ny fiaramanidina 35,000 eo ho eo. Ny seranam-piaramanidina dia tohanan'ny mpandraharaha mainstay Lufthansa, Alemana ary mpitatitra iraisam-pirenena ao anatin'izany ny Turkish Airlines sy FlyNikki ary manantena ny hampiakatra ny mpandeha amin'ny mpandeha ho 1.2 tapitrisa isan-taona. Mitombo koa ny asa aman-draharaha sy ny fiaramanidina ankapobeny. Muenster Osnabrück dia manolotra fotodrafitrasa fandraisam-bahiny VIP sy ora fisokafana 24/7.